Manoloana ny firongatry ny tambajotra ny ankamaroan’ny olona dia voasariky ny tsara sy ny fifandraisana atao eo amin’ny Internet. Toy izany ny fifandraisana dia, araka ny natiora, mitovy virtoaly tantara, izay mety nandritra ny fotoana mandeha eo amin’ny tena. Ao amin’ny teny hoe, ny olom-pantatra, ny fifandraisana, ny fifandraisana amin’ny olona manerana izao tontolo izao dia lasa indraindray dia mora kokoa noho ny isan-tsotra, olom-pantatra, mandratra eny an-dalambe, satria afaka manao izany an-tserasera mora kokoa: tsy am-pihambahambana hoe, ny henatra.
Ny tsara indrindra amin’ny rehetra ny fifandraisana sy ny olom-pantatra, dia hahazo ny toerana marina, raha toa ka mandehana hitady ny»namana virtoaly»amin’ny Mampiaraka manokana namany sary. Ny mahatsara ireo toerana dia eto amin’ny tena mora sy marina izay azo atao ho an’ny fanontaniana fikarohana mba hahita anarana amin’ny lehilahy izay indrindra dia gaga ianao. Eto, samy»virtoaly toetra amam-panahy»ny mombamomba azy, ny sary rakikira sy ny lisitra feno ny Fialam-boly sy ny safidy manokana eo amin’ny fiainana. Noho izany, miaraka izany ianao dia afaka mora foana hanoratra ny mombamomba ny olona iray nihaona sy ny fitondran-tena ny fifandraisana.
Fa ilaina ny mahatsiaro fa ny olom-pantatra amin’ny toerana toy izany, ary ny Internet tamin’ny Ankapobeny, dia maro ny endri-javatra, izay tianao hihaona. Noho izany, ao amin’ny tambajotra global mipetraka maro be ny olona izay hanohy ny tanjona isan-karazany. Ohatra, ny namana, ny fitiavana, ny lehibe, ny fifandraisana, ny firaisana ara-nofo, manadala ankizilahy, na fotsiny ny tanjona — taratasy miaraka amin’ny virtoaly interlocutor. Mazava ho azy, misy ireo olona izay mitsidika ny global tambajotra noho ny te hahafanta-javatra. Tadidio fa raha misy olona vonona ny ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana ary angamba na dia ny virtoaly fitohizan ny tantara, dia tena tsara mameno ao amin’ny mombamomba azy sy ny fanaovana ho azy manokana ny sary.
Amoron-dalana, eo amin’ny sary. Raha handeha ianao manana lehibe olom-pantatra, dia aza adino mihitsy ny mamorona elektronika sary rakikira. Izany no tsara indrindra ho toy ny tanjona mety sary nalaina tao an-trano, ary mahazo aina manodidina azy. Zava-dehibe eo amin’ny sary io dia mampiseho mazava tsara ny olona iray (sary amin’ny solomaso na ny vita avy any amin’ny lavitra fomba fijery dia tsy heverina).
Ny zava-mahaliana dia ny ankamaroan’ireo mpitsidika ny Mampiaraka toerana fandoavana ny saina lehibe ny sary rakikira noho ny fijerena na dia ny tsara ny fanontaniana. Amoron-dalana, eo ny fanontaniana. Raha toa ka mbola te-hanana lehibe olom-pantatra, dia aza adino ny mamaritra mazava tsara ao amin’ny mombamomba izay tadiavinao ao amin’ny tranonkala ity ary inona no antony izy ireo manompo. Koa aza adino ny manome ny tombontsoa sy ny Fialam-boly.
Tsarovy fa tonga eto ianao dia afaka mahita ny tsy tia, fa koa tena namana, nefa ianao, raha ny olom-pantatra mijoko ny filalaovana fitia, dia mampakatra sary podravanje sy mandoa ny saina ho an’ireo izay afaka mirehareha ihany sangan’asany.
Ary farany, tadidio fa tsara ao amin’ny tambajotra global afaka mitombo foana ho zavatra bebe kokoa amin’ny mahaliana ny tetika fampandrosoana. Koa raha tianao ny lehilahy, aza misalasala ny manoratra azy voalohany. Amoron-dalana, amin’ny Mampiaraka toerana dingana voalohany avy amin’ireo tovovavy raisina ho tena ara-dalàna.
Internet ny fifandraisana sy ny fototry.
Amin’ny fifandraisana amin’ny namana virtoaly, dia aza hadinoina momba ny tanjona lehibe indrindra, nahoana ianao no manao izany. Dia ho ianao ihany no ho afaka tsy mazava sy tsy mazava ny toe-javatra. Nandritra izany fifandraisana, miezaka ny hamantatra ny miresaka amin’ny rehetra ny»mahatsara»sy»maharatsy»ary miezaka ny manapa-kevitra ianao fa tena nanaitra ity lehilahy ity.
Ao amin’ny virtoaly ny fifandraisana, ary koa eo amin’ny fiainana, dia mila mampiseho ny fahalalam-pomba sy ny fanajana ny olona izay teo amin’ny lafiny hafa amin’ny mpanara-maso ary koa tokony tsy Frank sy ny ratsy fanambarana ao amin’ny adiresy.
Aza adino ny momba ny vazivazy
Noho ny vazivazy ianao dia mety ho liana amin’ny ny namana, sy ny hanazava ny ny fifandraisana.
E-mail taratasy sy ny endri-javatra.
Virtoaly ny fifandraisana sy ny fifaneraserana koa ny miavaka tsara ny fitsipika, tsy manaja izay mety indrindra vokany eo amin’ny mazava ho azy ny zava-mitranga. Noho izany, ny fitsipika fototra ny fifandraisana amin’ny lehilahy ny Aterineto:
Fitsipika voalohany: tsy maintsy miezaka mba hilazana ny fiainany manontolo ka inona no mahaliana anao dia tsy nanana. Toy izany frankness dia afaka hanakana tanteraka ny mifanohitra amin’izany firaisana ara-nofo. Soraty ny zavatra rehetra izay hevitrao, tsy an-tsipiriany. Ny sasany amin’ireo fanontaniana ny valiny tsotra sy fohy»Eny»na»tsia»dia tsy lalina any antsipirihany. Mangataka foana mitovy isa ny fanontaniana, izay tsy hihoatra ny laharana nomena anao.
Faharoa fitsipika: miezaha mba hilaza ny marina ary fa na inona na inona. Tsy tokony handainga momba ny bika aman’endriny, ny sata ara-panambadiana, sy faritra maro hafa ao amin’ny fiainana. Tsarovy fa na ho ela na ho haingana isan-mitoetra ho marina ary ho fiantraikany lehibe momba ny fomba ny ho avy dia mitondra anao. Tsy maintsy manaiky ny maha-ianao anao, tsy misy fanampiny saron-tava sy ny foronina.
Fahatelo fitsipika: aza aseho be asa. Aoka hatao hoe misy lehilahy iray elektronika hafatra sy ny karatra firarian-tsoa. Izany dia mety fotsiny hampitahorana azy eny. Tsarovy fa ny olona rehetra tia ny atao mba handresy, izay no mahatonga ny asa dia mba liana ny interlocutor, ary ny ambiny kosa dia ho azy. Raha ianao handeha eo alohanao, izy dia ho very fotsiny ny rehetra hanaja ny ho anao. Mazava ho azy, tsy mamaly ny hafatra dia tsy mendrika izany, dia vao hahita ny tena ivon-toerana ao amin’ny taratasy sy ny tapa-kazo ny tavany. Fa na izany na tsy izany, dia tsarovy fa ny mazava ho azy fa lehibe ny zava-nitranga dia ampy fotsiny ny olona.
Ary farany, dia tsy ilaina ny miandry ela loatra virtoaly ny serasera sy ny fifandraisana. Raha toa ka tena mendrika ny namana virtoaly, mangina podtalkivaet izany ho an’ny tena ny fivoriana. Mianatra fotsiny ny fotoana momba ny soso-kevitra.
Tsara ny fifandraisana
← Phone fa free raha tsy misy ny fanekena sy ny tsy misy fisoratana anarana
Ny Mampiaraka toerana sary →